Tsy mandeha ny efijery mikasika ny iPhone-ko! Ity ny The Fix. - Iphone
ny olona tsy afaka mihaino ahy amin'ny iPhone
efijery iphone 5 tsy mamaly
ny fomba fanamboarana iphone mipetaka amin'ny sary famantarana paoma tsy misy solosaina
inona no hatao raha mangatsiaka ny ipad
Ara-dalàna ny fahatsapana ho sorena rehefa tsy mandeha ny efijery mikasika ny iPhone. Mampiasa ny iPhone amin'ny zava-drehetra ianao, manomboka amin'ny fiantsoana ka hatramin'ny famindrana sary - fa aza avela hampihena anao ny 'olana amin'ny fikitika'. Amin'ity lahatsoratra ity dia hazavaiko maninona no tsy mandeha ny efijery mikasika ny iPhone , ny fomba fanamboarana ireo olana izay afaka amboary ao an-trano, ary atoroy ny safidy fanamboarana lehibe, raha mikasika an'io.
Betsaka ny antony mety tsy hiasana intsony ny efijery mikasika ny iPhone. Soa ihany fa misy fomba maro ihany koa hamahana ireo olana ireo.
Fa maninona no tsy mamaly ny efijery momba ny iPhone?
Ny zavatra voalohany tokony hataontsika dia ny mamantatra NAHOANA efijery mikasika ny iPhone. Matetika, ny olana dia mitranga rehefa ny ampahany ara-batana amin'ny fampisehoana ny iPhone-nao izay manodina (antsoina hoe ny digitizer ) mijanona tsy mandeha tsara na rehefa mijanona tsy 'miresaka' amin'ireo fitaovana araky ny tokony ho izy ny rindrambaiko iPhone. Raha atao teny hafa, dia mety ho fitaovana na olan'ny lozisialy, ary hanampy anao roa amin'ity lahatsoratra ity aho.
Tsy mandany vola na inona na inona matetika ny famahana olana amin'ny rindrambaiko iPhone. Mora kokoa ihany koa izany noho ny famonoana ny efijery misy kapoaka suction (azafady aza atao izany). Noho io antony io dia hanomboka amin'ny fanamboarana rindrambaiko izahay ary hiroso amin'ny fanitsiana ireo olana ara-batana raha tsy maintsy atao izany.
Fanamarihana iray momba ny rano mitete sy ny raraka: Raha vao nandatsaka ny iPhone ianao vao tsy ela akory izay, ny olana amin'ny olana eo amin'ny sehatry ny fitaovana dia tokony homena tsiny noho ny olana amin'ny efijery mikasika anao - fa tsy matetika. Ny rindrambaiko miadana sy ny olana mandeha matetika dia matetika vokatry ny olan'ny rindrambaiko.
Ny zavatra farany tokony tsy hadino dia ny mpiaro ny efijery mety hiteraka olana amin'ny efijery mikasika ny iPhone. Andramo esorina ny mpiaro ny efijery iPhone anao raha manana olana amin'ny fakan-tsary ianao.
menaka castor hanamaivana ny hoditra
Raha miasa ny efijery mikasika anao indraindray , mamakia hatrany. Raha tsy mandeha mihintsy, dia mandehana mankany amin'ilay faritra etsy ambany nantsoina Rehefa tsy mamaly ny mikasika ny iPhone mihitsy ny iPhone-nao .
Teny fohy amin'ny aretina mikasika ny iPhone
Ny aretin'ny iPhone dia manondro andianà olana izay misy fiatraikany amin'ny iPhone 6 Plus. Ireo olana ireo dia misy bara volondavenona sy manjelanjelatra eo an-tampon'ny fampiratiana ary ireo olana amin'ny fihetsika iPhone, toy ny pinch-to-zoom sy Reachability.
Misy adihevitra vitsivitsy momba ny antony mahatonga ny aretin'ny iPhone. Apple nilaza dia vokatry ny 'nampidinina imbetsaka teo amin'ny faritra mafy ary avy eo dia nahatonga fihenjanana bebe kokoa amin'ilay fitaovana.' Fantatr'izy ireo ny olana ary manana programa fanamboarana manokana raha miaina an'ity olana ity amin'ny iPhone-nao ianao. Nanokatra ny iPhone 6 Plus ny iFixIt ary nahita izay antsoin'izy ireo hoe a “Lesoka famolavolana.”
Na inona na inona tena antony mahatonga ny olana dia azonao atao ny mitondra ny iPhone any Apple ary amboary amin'ny sarany $ 149 .
Olana momba ny lozisialy sy ny efijery mikasika ny iPhone
Ny olana amin'ny rindrambaiko izay milaza amin'ny findainao ny fomba fihetsikao dia mety hahatonga ny efijery findainao iPhone hijanona tsy hiasa. Mety hanampy amin'ny famerenana rindrambaiko manahirana izany raha tsy mandeha ny efijery mikasika anao iPhone.
ny iphone-ko tsy afaka mandalo ny sary famantarana paoma
Mijanona tsy mamaly ve ny efijery mikasika anao rehefa mampiasa fampiharana iray ianao? Mety ho tompon'andraikitra amin'izany fampiharana izany. Andramo esory ary esory indray izy io. Raha esorina ny app:
Tadiavo amin'ny iPhone ny app Efijery an-trano . Ny efijery Home no hitanao etsy ambany amin'ny pikantsary etsy ambany.
Tsindrio ary tazomy ilay kisary fampiharana mandra-pisehoan'ny menio.
paompy Delete App .
Raha tsy mandeha ny efijery mikasika ny iPhone aorinao aorian'ny namerenanao ny fampiharana dia mandefasa hafatra amin'ny mpamorona fampiharana. Mety manana vahaolana amin'ny olana izy ireo na efa miasa amin'ny vahaolana.
Ahoana no fomba andefasako hafatra amin'ny mpamorona fampiharana?
Tsindrio raha hanokatra ny App Store .
paompy karohy eo amin'ny farany ambany amin'ny efijery ary mitady ny fampiharana.
Tsindrio ny fampiharana kisary hanokatra antsipiriany momba ny fampiharana.
Mikorisa mankany ambany ary tap Tranokala developer . Ny tranokalan'ny mpamorona dia halefa.
Mitadiava endrika fifandraisana na adiresy mailaka ao amin'ny tranokalan'ny developer. Tsy tokony ho sarotra ny mahita fa ny developer dia mendrika ny sira. Tsarovy fa mankasitraka azy ireo mpamorona tsara rehefa ampahafantarinao azy ireo ny olana amin'ny fampiharana azy ireo!
Mahalana izany, fa indraindray ny fanavaozana ny rindrambaiko iPhone dia mety hiteraka olana amin'ny efijery mikasika. Ny tranga voarakitra an-tsoratra vao haingana indrindra momba izany dia ny fanavaozana ny iOS 11.3 an'ny Apple. Ny olana dia nohavaozina haingana tamin'ny alàlan'ny fanavaozana Apple manaraka.
fepetra takiana hividianana trano finday
Misokatra Fikirana ary tap General -> Fanavaozana ny lozisialy . paompy Sintomy sy apetraka raha misy fanavaozana iOS amin'ny iPhone.
Rehefa tsy mamaly ny mikasika ny iPhone mihitsy ny iPhone-nao
Ny olana amin'ny efijery mikasika izay miseho amin'ny fampiharana marobe na rehefa tsy manana fampiharana misokatra ianao dia mety hiteraka olana amin'ny rindrambaiko iPhone. Dingana iray voalohany fanitsiana vahaolana dia ny famahanana ny iPhone hiala sy miverina indray, saingy sarotra ny manao izany rehefa tsy mandeha ny efijery mikasika anao! Fa kosa, mila manao a isika reset mafy . Ity no fomba:
Raha tsy vonoina amin'ny fomba mahazatra ny iPhone -na raha tsy mamaha ny olana ny famonoana iPhone sy miverina indray dia manandrama mamerina mafy. Mba hanaovana izany, tazomy ny bokotra Power and Home mandritra izany fotoana izany. Andraso segondra maromaro, mandra-pahatongan'ny sary famantarana Apple eo amin'ny efijery, ary avelao handeha.
Amin'ny iPhone 7 na 7 Plus, misy famerenanana mafy atao amin'ny alàlan'ny fanindriana sy fihazonana ny bokotra herinaratra SY bokotra midina miaraka mandritra ny segondra maromaro mandra-pahitanao ny fisehoan'ny Apple amin'ny fampisehoana.
Mba hamerenanao mafy ny iPhone 8 na maodely vaovao kokoa dia tsindrio ary alefaso ny bokotra miakatra, kitiho ary alefaso ny bokotra volume down, avy eo tsindrio ary tazomy ny bokotra sisiny mandra-pahatonga mainty ny efijery ary hiseho eo afovoan'ny fampisehoana ny sary famantarana Apple.
Ny famerenana mafy tampoka dia mampiato tampoka ny fizotran-javatra rehetra eo amin'ny iPhone sy afaka miteraka olana eo amin'ny rindrambaiko. Matetika tsy izany, fa hevitra tsara ny manaova famerenana sarotra fotsiny rehefa ianao NILA ny .
mainty hatrany ny ipad-ko
Mbola tsy mandeha ny efijery mikasika ny iPhone-ko!
Mbola manome anao olana ve ny efijery mikasika ny iPhone? Mety ho tonga ny fotoana hanandramana hamerina ny iPhone amin'ny toe-javatra niainany. Alohan'ny hanaovanao izany dia alao antoka fa backup ny iPhone . Azonao atao izany amin'ny alàlan'ny fampidirana ny iPhone ao anaty solosaina sy ny fampandehanana iTunes (PC sy Mac mandeha Mojave 10.14), Finder (Macs mihazakazaka Catalina 10.15), na mampiasa iCloud .
Manoro hevitra aho ny hanao famerenana amin'ny laoniny ny DFU (Fanavaozana ny mikirao praogramanao). Ity karazana famerenana amin'ny laoniny ity dia somary feno kokoa noho ny famerenana amin'ny laoniny ny iPhone nentim-paharazana. Mba hanaovana izany dia mila ny iPhone-nao, tariby hampidirana azy ao anaty solosaina ianao, ary ny kinova iTunes farany teo.
Ny fametrahana ny iPhone ao anaty maody DFU dia mety ho sarotra be ihany. Raha mila fitsangatsanganana an-dàlana tsikelikely dia jereo ny lahatsoratray izay manazava tsara ny fomba fametrahana ny iPhone ao anaty maody DFU . Rehefa vita ianao dia miverena eto.
Rehefa tokony homena tsiny ny fitaovana momba ny efijery momba ny fantsonao
Raha nandatsaka ny iPhone-nao tato ho ato ianao dia mety nanimba ny écran. Ny fampisehoana vaky dia iray amin'ireo famantarana miharihary amin'ny efijery efa simba ary mety hiteraka olana isan-karazany amin'ny efijery mikasika.
Ny vongan-drano iray dia mety hamaha na hanimba ny sosona ambanin'ny sosona n'ny fakan-tànanao iPhone. Ny zavatra hitanao sy apetraky ny tananao dia ampahany iray amin'ny efijery mikasika. Ao ambaniny dia misy efijery LCD mamorona sary hitanao. Misy koa ny antsoina hoe a digitizer . ny digitizer dia ampahany amin'ny iPhone mahatsapa ny fikasanao.
Ny efijery LCD ary digitizer samy mifandray amin'ny tabilao lojika an'ny iPhone -o ilay solosaina izay mampandeha ny iPhone-nao. Ny fandatsahana ny iPhone dia afaka mamaha ny tadiny mampifandray ny efijery LCD sy ny digitizer amin'ny tabilao lojika. Io fifandraisana malalaka io dia mety hahatonga ny efijery findainao iPhone hijanona tsy hiasa.
Ny vahaolana MacGyver
Rehefa latsaka ny iPhones dia mety ho voaroaka ireo tariby madinidinika izay mifandray amin'ny tabilao lojika iPhone ampy fotsiny mba hijanonan'ny efijery mikasika ny asany, na dia tsy misy simba ara-batana aza. Longshot io, fa ianao MEY afaka manamboatra ny efijery mikasika ny iPhone amin'ny alàlan'ny fanindriana eo amin'ny ampahan'ny fampisehoana izay ampifandraisin'ny tariby amin'ny tabilao lojika.
Fampitandremana: Mitandrema! Raha manindry mafy ianao dia azonao atao ny mamaky ilay fampirantiana - saingy ity dia mety iray amin'ireo toe-javatra 'tsy misy very', ary manana niasa ho ahy taloha.
Safidy amin'ny fanamboarana efijery mikasika ny iPhone Touch
Raha tsy mandeha ny iPhone nikitika anao satria tapaka tanteraka dia ianao afaka manafatra kitapo ary miezaha hanova ny ampahany amin'ny tenanao, fa Tsy hanome sosokevitra azy aho . Raha misy ny tsy mety ary nosoloinao ny ampahany amin'ny iPhone -n'ny ampahany Apple, ny Genius Bar dia tsy hijery ny iPhone-nao akory - ho eo am-pelatanana ianao ho an'ny iPhone vaovao amin'ny vidiny antsinjarany feno.
Ny Genius Bar dia manao asa tsara amin'ny fampirantiana vaky, saingy andoavany premium ho an'ny serivisin'izy ireo. Hamarino tsara fa mandamina fotoana aloha raha manapa-kevitra ny hitsidika ny Apple Store ianao.
Raha te hitahiry vola ianao, dia atoro anao ny serivisy fanamboarana antoko fahatelo kalitao toa hanin-kotrana raha te hitahiry vola ianao. Ho tonga aminao i Puls ary hamboariny ao anatin'ny 30 minitra ny iPhone misy fiantohana mandritra ny androm-piainana, vola kely noho Apple.
Raha vantany vao soloina ireo sombin-javatra simba dia tokony handeha toy ny vaovao ny efijery mikasika ny iPhone. Raha tsy izany dia ny rindrambaiko no mety omena tsiny.
Tsy niasa intsony ny efijery iphone 6
Safidy tsara hafa koa ny fividianana iPhone vaovao. Ny fanamboarana ny efijery amin'ny azy manokana dia tsy KOA lafo. Na izany aza, raha singa maromaro no tapaka rehefa nandatsaka ny iPhone ianao dia tsy maintsy soloina avokoa izy rehetra. Ny fanamboarana ny efijery anao dia mety hivadika zavatra lafo kokoa. Ny fampiasam-bola an'io vola io amin'ny finday smartphone vaovao no mety ho vahaolana lafo vidy kokoa. Zahao ny Fitaovana finday UpPhone mampitaha ny telefaona finday rehetra ary ohatrinona ny vidin'izy ireo amin'ny mpitatitra tsy misy tariby.
Miverena mifandray amin'ny iPhone-nao
Ny efijery findainao iPhone dia teknolojia sarotra sy mahavariana. Manantena aho fa nanampy anao ity lahatsoratra ity raha toa ka tsy mandeha ny efijery mikasika anao iPhone, ary tiako ho fantatra izay vahaolana mety aminao ao amin'ny fizarana fanehoan-kevitra etsy ambany.
Mainty ny efijery iPhone-ko! Ity ny tena antony.
Ahoana no hivarotako ny findaiko? Makà vola anio!
Nofinofy very ao amin'ny hotely
Skype tsy mandeha amin'ny iPhone? Ity ny vahaolana.
Inona no atao hoe jailbreak amin'ny iPhone ary tokony hanao iray aho? Ity no ilainao ho fantatra.
Vavaka ho an'ny mpisolovava sy mpitsara
Inona no atao hoe Aura? - Inona no karazana fitaomana ho ahy?
Mifoha amin'ny 1 maraina, 2 maraina, 3 maraina, 4 maraina ary 5 maraina
Ahoana no fomba hampiasako ilay jiro eo amin'ny iPhone?
Ahoana ny fomba hamadihana iPhone: Ny torolàlana haingana sy mora!
Tsy hanafatra backup amin'ny iTunes amin'ny Mac ny iPhone-ko! Ity ny The Fix.
Inona ny 'Hafa' ao amin'ny fitehirizana iPhone? Ity ny Marina & Ahoana ny fomba hamafana azy!
Taratasy fanolorana asa ho an'ny fifindra-monina
Fa maninona no maty haingana be ny bateriko iPhone? Ity ny The Real Fix!
Ny tambin-karaman'ny mpiasa any Etazonia
WhatsApp tsy miasa amin'ny iPhone? Ity ny vahaolana!